Kuwani waa ciyaaraha ugu fiican ee ciyaartoy badan oo khadka tooska ah loogu ciyaaro iPhone | Wararka IPhone
Ciyaaraha ugu badan ee ciyaartoy badan oo khadka tooska ah loogu ciyaaro iPhone
Taleefannada casriga ahi inay soo fiicnaanayaan maahan wax qarsoodi ah, sida aysan taa ahayn Ciyaaraha iyaga ayaa ka faa'iideysanayay kuwii ugu fiicnaa sanadihii la soo dhaafay. Cinwaanno badan oo hadda laga heli karo App Store waxay leeyihiin tayo ku filan dhammaan qeybaha ugu yaraan u qalma in la ogaado.
In kasta oo ay run tahay in midkoodna loogu talagalay in lagu beddelo qalabka wax lagu beddelo oo loo beddelo iPhone-keena midkoodna, saacadaha madadaalada ee ay bixin karaan way badan yihiin. Waxaas oo dhami xilli ay tahay goorta dabayshu waxay u dhacdaa iyada oo loo rogo taageerayaasha ciyaaraha fiidiyowga ee moobiilka, iyadoo kororka awoodda moodooyinka iyo kororka sidoo kale cabirka shaashadda.
1 Ciyaaraha ciyaartoy badan waxay lamid yihiin madadaalo la hubo
2 dhantaalay Brigade
3 5 Dagaalamo Modern
7 Gooryaanka 3 iyo Slighter.io
Ciyaaraha ciyaartoy badan waxay lamid yihiin madadaalo la hubo
Dhammaan cayaaraha oo dhan, kuwa leh qaabka khadka tooska ah ayaa taagan maanta, kuwaas oo bixiya suurtagalnimada la ciyaar isticmaalayaasha adduunka oo dhan waqtiga dhabta ah, siinta firfircooni dheeri ah arrinta. Haddii astaantan la heli karo iyo haddii kaleba waxay qayb ahaan go'aamin doontaa guusheeda, sheegasho aan laga iloobin horumariyeyaasha.
Ciyaartu waxay bilaabaysaa iyadoo la adeegsanayo internetka iyadoo ah habka ugu weyn ee isdhexgalka ay soo jiitaan fiiro gaar ah sababtoo ah madadaalo lagu daray oo ay u maleynayaan marka la barbardhigo kuwa dhaqameed, waana taas sababta aad u ogaan laheyd cinwaanada ay ku hoos jiraan saacadaha iyo saacadaha qarsoon ee madadaalada. Waxan iyaga kaaga sheegi doonaa xagga hoose.
Tani waa ciyaar loogu talagalay kuwa jecel fasallada 'qabashada calanka' iyo Deathmatch oo ka dhigtay cajalado kale oo fiidiyoow ah si guul leh taariikhda oo dhan. Iyada oo leh jilayaal iyo jawi udhow animation marka loo eego khariidad dhab ah, ciyaaruhu waxay noqon doonaan madadaalo weyn oo ka mid ah duruufaha badan ee la ciyaari karo. Waxay kuxirantahay qaabka ciyaarta aan doorano, kuwani way kala duwanaan doonaan si ciyaar kastaa u gaar tahay.
Saacadaha ciyaarta iyo waqtiga la qaatay ma ahan kuwo aad muhiim u ah, maxaa yeelay xirfadda mid walba waxaa lagu tiriyaa hubka la qaadayo, in kasta oo ay had iyo jeer caawiyaan. Helitaanka horumarintu waa mid fudud, laakiin waa inaan ciyaarno dhowr ciyaarood si aan u helno qalab sax ah oo noo oggolaanaya inaan noqono sayid-yahanno buuxda.
5 Dagaalamo Modern
Magaca shaki kuma jiro shaki: waxaan la kulannaa muuqaal toogasho ah. Kani waa mid ka mid ah kuwa ugu dhameystiran ee aan hadda ka heli karno iOS haddii aan xiiseyneyno kuwa jilitaanka ah ee dagaallada konsol ee caadiga ah. Si la mid ah Blitz Brigade, Gameloft waa shirkadda ka dambeysa cinwaankan, taas oo badanaa calaamad u ah ugu yaraan xoogaa tayo ah.
Haddii dagaal ficilku yahay shaygaaga, ciyaartan malaha wax niyad jab ah kuguma ridi doonto oo waxay kugu qabsan doontaa daqiiqadda ugu horreysa. Sidee? Tani adiga maahan Sii wad akhriska!
5 Dagaalamo Modernfree
Lagu abaal mariyey ciyaartii ugu wanaagsanayd ee mobilka ee WWDC 2015, Asphalt 8 wuxuu aad u da 'weynaa labadii sano ee la soo dhaafay. Marka laga reebo joojinta ku-dallacaha xawaaraha oo lagu qaado magaca wanaagsan, horumariyeyaasheeda ayaa fahamsan in caannimadu ay tahay mid muddo gaaban ah dadka isticmaala waa inay ku kasbadaan iyaga oo ku saleynaya wararka iyo hagaajinta.
Tani waxay u badan tahay ciyaarta tartanka ugu fiican ee ku taal iPhone App Store hadda. In kasta oo, sidee bay noqon weyday haddii awood u leeyahay inuu soo xasuusto dhinacyo gaar ah amaanta Baahida Xawaaraha laga bilaabo PlayStation. Haddii waxa aad rabto ay tahay inaad la dagaallanto tartamayaasha kuleylka laamiga iyo "Xawaaraha" waa magacaaga labaad ee dambe, waxaa laga yaabaa inay tahay waqtigii aad gadaal ka riixi lahayd gawaarida qaar ee cajiibka ah ee ciyaartan oo aad u dagaallanto jagooyinka sare .
Ikhtiyaariyadaha habeynta, raadadyo kala duwan oo aan la tirin karin, qaababka ciyaarta ee ku kala duwan tartanka, iyo dhacdooyinka u heellan ee taariikhaha la cayimay ayaa ka mid ah waxyaabaha adiga kugu sugaya Asphalt 8: Hawada.
Asphalt 8: hawadafree
Haddii aadan wali maqal cinwaankan, waa sababta oo ah laga yaabee in ciyaartan aysan kugu habboonayn wax badan. Clash Royale waa dhaxal sugaha Dagaalkii Qabiilooyinka, magac qarsoon tiro saacado aan lasoo koobi karin ah oo ay wada ciyaareen malaayiin ciyaartoy ah oo ka kala yimid daafaha dunida. Ciyaartan cusub, guushu waxay umuuqataa mid kasii weyn, ku mashquulinta yar iyo weynba xamaasado xamaasad leh si ay u gaaraan heerka ku xiga oo ay ku guuleystaan ​​"fagaaraha".
Furaha guusha cayaarahan waxay kujiraan awooda bulshada ee ay leeyihiin, awoodna u leh ka tirsan tahay "qabiil" dad kale, sidaas awgeed wadaagaan guusha oo sii wad koritaanka ciyaarta. Iyada oo leh isdhexgal aad u fara badan, Clash Royale waa nooca ciyaarta aan waxba galabsan ee aad soo dejiso si aad waqtiga u dhaafto oo aadan u goyn karin labaatan daqiiqo ka dib. Runtii balwad.
Haddii aad u maleyneyso inaad horeyba wax uga ogtahay kulankaan, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad soo booqato hagahayaga leh khiyaanooyinka ugu fiican ee Clash Royale.
Taageerayaasha waqtiga-waqtiga dhabta ah, Vainglory waa soo dejin ku dhow qasab, gaar ahaan haddii qaabka 'League of Legends' uu nala socdo. Ikhtiyaarradeeda weyn markaad dooranaysid geesiyaal, iyo sidoo kale qaababkeeda kaladuwan ee kaladuwan - oo aad waliba kaheli karto dhacdooyinka gaarka ah sida ku xusan taariikhaha- Samee qabatinka ugu dhakhsaha badan. Haddii aad dooneysid inaad la ciyaarto kooxdaada saaxiibbada ah ama haddii aad doorbideyso inaad bilowdo kali kali tacliin, Vainglory waa mid ka mid ah kuwa aan niyad jabin.
Waxaa lagu abaalmariyay qiimeynta "Ciyaarta ugu wanaagsan ee mobilada" ee Abaal marinta Caalamiga ah ee Mobilada runtiina waa in dhaleeceyn yar loo soo jeediyo cinwaankan. Horumariyayaashu waxay carrabka ku adkeeyeen in cayaartu abaalmarin u siiso kuwa ugu xirfad iyo xirfad badan goobaha dagaalka oo aysan ahayn kuwa maalgeliya lacagta ugu badan ee howlaha cusub, markaa muuji qiimahaaga!
Gooryaanka 3 iyo Slighter.io
Haddii aan saaxiibo nahay dirxi, waxaa laga yaabaa in magacyada cayaarahan ay horayba noogu yaqaanaan sababtoo ah ahmiyadda ay lahaayeen sannadihii la soo dhaafay. Gooryaanka 3 waa wax walba oo aan ka filan karno ciyaarta PC-ga caadiga ah. Noocani wuxuu kakooban yahay qaabab ciyaar oo kaladuwan oo aad awood ugu yeelan karto inaad la ciyaarto asxaabta ama aad ku jejebiso dixiriga kuwa kale ee ka soo horjeeda adduunka. Si fudud oo xiiso leh, ma dalban kartid wax intaa ka badan.
Si kastaba ha noqotee, waxaan fahansanahay in qiimaha kulankaan ugu horeeya uu dad badan dib u celin karo marka ay timaado soo galitaanka adduunka ee dadkan yar yar, taasi waa sababta aan sidoo kale u soo jeedineyno si isku mid ah oo ansax ah oo xor ah. Dhaqdhaqaaqa ka dambeeya Slighter.io wuxuu umuuqdaa mid fudud: “cun oo ha cunin”, laakiin xaqiiqadu waa taas ma aha hawl fudud inaad noqotid dixiriga ugu weyn ciyaarta oo markaa ku fadhiya booska koowaad. Waxaan kugu xujeynaynaa inaad isku daydo.
Maxaad u maleyneysaa kuwan ciyaartooyda badan ee macruufka ah? Miyaad ku talineysaa wax intaa ka badan? Haddii aad inbadan damacday, ha seegin liistada leh ciyaaraha ugu fiican ee ku yaal App Store.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Barnaamijyada IPhone » Ciyaaraha ugu badan ee ciyaartoy badan oo khadka tooska ah loogu ciyaaro iPhone
Amazon waxay bilaabaysaa Dash Wand oo ay ku jirto Alexa